Apple inomisa kutengesa kutsva kweTurkey sezvo mari yeTurkey yaparara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Turkey Kuputsa Nhau » Apple inomisa kutengesa kutsva kweTurkey sezvo mari yeTurkey yaparara
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Shopping • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Mutengo wekutengesa wezvigadzirwa zveApple muTurkey unosanganisira akati wandei mutero uye mubhadharo, saka ivo vanowanzo kudhura zvakanyanya kupfuura kuUnited States.
Kunyura kwakapinza kwe Teki's national currency yakamanikidza American tekinoroji kambani apuro kumisa kutengesa kwezvinhu zvayo zvese kuburikidza newebsite yeTurkey yepamutemo.
apuro inotarisirwa kukwidza mitengo kudzikamisa kuderera kwemutengo wezvigadzirwa zvayo nekuda kwekudonha kweTurkey lira, iyo yakadzika rekodhi yakaderera ye13.5 lira padhora nezuro.
pari apuro's Turkish online store haitenderi vashandisi kuti vawedzere zvigadzirwa pangoro, iine zvinhu zvese zvakanzi 'zvisiri kuwanikwa.'
Mutengo wekutengesa we apuro zvigadzirwa mu Teki inosanganisira akati wandei mitero uye muripo, saka ivo vanowanzo kudhura zvakanyanya kupfuura muUnited States. Nekudaro, mushure mekunge lira yadonha imwe 15%, mamiriro akadzokera kumashure, izvo zvakaita kuti Apple imise kutengesa kusvika yagadzirisa mitengo.
Mari yeTurkey yakakwanisa kudzoreredza kumwe kurasikirwa kwayo nhasi, kukwira kusvika pa12.6 lira padhora na09:19 GMT, zvichimaka kuwana 0.8% pakupera kwezuva rapfuura. Zvakadaro, kurasikirwa kwayo kunopesana negreenback kunomira pa40% gore rino, nekudonha kwe19% mumazuva gumi apfuura chete.